မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပဋိညာဉ်များ အတည်ပြုဆောင်ရွက်ခြင်း
Ataglance – ပဋိညာဉ်များ အတည်ပြုဆောင်ရွက်ခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ် အဆင့် ၁၈၈
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရမှတ်* ၂၄.၅၃ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ရမှတ်အတိုင်း အပြောင်းအလဲမရှိ)
ဒေသတွင်းပျမ်းမျှနှုန် (အရှေ့အာရှ နှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ) ၅၂.၇၅
ပဋိညာဉ်များ အတည်ပြုဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဆောင်ရွက်မှု သတင်းအချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန် ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန် ကြာမြင့်ချိန်၊ ကုန်ကျစရိန်နှင့် တရားစီရင်ရေး ဆောင်ရွက်မှု အရည်အသွေး
ထိရောက်သောပဋိညာဉ်အတည်ပြုခြင်းကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ရရှိသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း နှင့် တည်ငြိမ်စွာ တိုးတက်လာခြင်း၊
တောင်းဆိုမှုတန်ဖိုး ၆၂၈၃၉၅၆ ကျပ်
(လွှမ်းခြုံသော) မြို့ ရန်ကုန်
ကြာချိန် (ရက်ပေါင်း) ၁၁၆၀
အမှုစွဲတင်ခြင်းနှင့် သမ္မန်စာဆင့်ဆိုခြင်း ၆၅
အမှုစစ်ဆေးစီရင်ခြင်းနှင့် စီရင်ချက်ချမှတ်ခြင်း ၈၁၅
စီရင်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း ၂၈၀
ကုန်ကျစရိတ် (တောင်းဆိုမှုအပေါ် ရာခိုင်နှုန်း) ၅၁.၅
တရားစီရင်ရေးဆောင်ရွက်မှုအရည်အသွေးအညွှန်း (၀-၁၈) ၃.၀
တရားရုံးဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၁-၅) ၁.၅
မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု (၀-၆) ၀.၀
အငြင်းပွားမှုကို အခြားနည်း ဖြေရှင်းသည့်စနစ် (၀-၃) ၁.၅
ရမှတ်- ၂၀၁၉ ခုနှစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း အစီရင်ခံစာအရ
၁. ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအမှုများကို စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သည့် သီးခြားတရားရုံး သို့မဟုတ် ဌာနရှိပါသလား။ မရှိပါ။ ၀.၀
၂. စမော်ကော်တရားရုံး (တန်ဖိုးနည်း တောင်းဆိုမှုများ စစ်ဆေးသည့် တရားရုံး) ၀.၀
၂.က စမော်ကော်တရားရုံး သို့မဟုတ် တန်ဖိုးနည်းတောင်းဆိုမှုများ အတွက် လွယ်ကူလျင်မြန်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှိပါသလား။ မရှိပါ။
၂.ခ ရှိလျှင် ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိပါသလား။ မရှိပါ။
၃. အမှုမစစ်ဆေးမီ ပညတ်မိန့်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိပါသလား။ ရှိပါသည်။ ၁.၀
၄. တရားသူကြီးများသို့ အမှုသစ်များကို အလျဉ်းသင့်သလို ခွဲဝေ စစ်ဆေး စေပါသလား။ ခွဲဝေစစ်ဆေးစေပါသည်။ သို့ရာတွင် သမားရိုးကျ နည်းအသုံးပြုသည်။ ၀.၅
၅. တရားရုံးတွင် အမျိုးသမီး၏ သက်သေထွက်ချက်တန်ဖိုးသည် အမျိုးသား၏သက်သေထွက်ချက် တန်ဖိုးနှင့် ညီပါသလား။ ညီပါသည်။ ၀.၀
၁.က တရားမမှုများတွင် အဓိကကျသော တရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချိန်စံနှုန်း သတ်မှတ်သည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိပါ သလား။ မရှိပါ။
၁.ခ ရှိလျှင်၊ တရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်များ (အနည်းဆုံး) (၃) ခု အတွက် အချိန်စံနှုန်းပြဋ္ဌာန်းချက် ရှိပါသလား။ မရှိပါ။
၁.ဂ ထိုအချိန်ဆိုင်ရာစံနှုန်းကို (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းအထက် လိုက်နာပါသလား။ မရှိပါ။
၂. အမှုရွှေ့ဆိုင်းခြင်း ၀.၀
၂.က အမှုရွှေ့ဆိုင်းခြင်းကို အများဆုံးခွင့်ပြုသည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် ရှိပါသလား။ မရှိပါ။
၂.ခ. အမှုရွှေ့ဆိုင်းခြင်းကို ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်သောအခြေအနေ နှင့် ချွင်းချက်များအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားပါသလား။ မရှိပါ။
၂.ဂ အမှုရွှေ့ဆိုင်းခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရှိပါက (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းအထက် လိုက်နာပါသလား။ မရှိပါ။
၃. သတ်မှတ်တရားရုံး (လသာတရားရုံး) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အောက်ပါအစီရင်ခံစာ (၄) ခု အနက် (၂) ခုကို ထုတ်ပြန်ပါသလား-
(၁) ပြီးပြတ်ခဲ့သောတရားမမှုများ၏ ကြန့်ကြာရက်များ အစီရင်ခံစာ၊
(၂) တရားမမှုများပြီးပြတ်နှုန်း အစီရင်ခံစာ၊
(၃) စစ်ဆေးဆဲအမှုများ၏သက်တမ်း အစီရင်ခံစာ နှင့်
ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ၀.၀(ပြောင်းလဲမှုသည် သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်ပြီးမှ ရရှိခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အစီရင် ခံစာတွင် အမှတ်မရရှိခဲ့ပါ။)
၄. သတ်မှတ်တရားရုံး (လသာတရားရုံး) တွင် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဆောင်ရွက်ရာ၌ အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပါသလား။ မပြုလုပ်ပါ။ ၀.၀
၅. သတ်မှတ်တရားရုံး (လသာတရားရုံး) တွင် တရားသူကြီးများ အသုံးပြုရန်အတွက် အီလက်ထရောနစ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ကရိယာများ ရှိပါသလား။ မရှိပါ။ ၀.၀
၆. သတ်မှတ်တရားရုံး (လသာတရားရုံး)တွင် ရှေ့နေများအသုံးပြုရန် အတွက် အီလက်ထရာနစ် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကရိယာများ ရှိပါသလား။ မရှိပါ။ ၀.၀
နည်းပညာသုံးတရားရုံး (၀-၄) ၀.၀
၁. တိုင်လျှောက်လွှာကို သတ်မှတ်တရားရုံး (လသာတရားရုံး) ၏ သတ်မှတ်ထားသောပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် အီလက်ထရောနစ် နည်းဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။ မလျှောက်ထားနိုင်ပါ။ ၀.၀
၂. သတ်မှတ်တရားရုံး (လသာတရားရုံး) တွင် စွဲတင်သောအမှု၌ သမ္မန်စာဆင့်ဆိုခြင်းကို အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် ဆင့်ဆိုနိုင်ပါ သလား။ မဆင့်ဆိုနိုင်ပါ။ ၀.၀
၃. သတ်မှတ်တရားရုံး (လသာတရားရုံး) တွင် ရုံးခွန်ကို အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် ပေးနိုင်ပါသလား။ မပေးနိုင်ပါ။ ၀.၀
၄. စီရင်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ၀.၀
၄.က တရားရုံးအဆင့်ဆင့်၏ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအမှု စီရင်ချက်များကို အများသိစေရန်အတွက် ပြန်တမ်း၊ သတင်းစာ သို့မဟုတ် အင်တာနက် သို့မဟုတ် တရားရုံးဝက်ဘ်ဆိုဒ်တို့တွင် ဖော်ပြပါသလား။ မဖော်ပြပါ
၄.ခ အယူခံတရားရုံးနှင့် တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေးအမှု စီရင်ချက်များကို အများသိစေရန်အတွက် ပြန်တမ်း၊ သတင်းစာ သို့မဟုတ် အင်တာနက် သို့မဟုတ် တရားရုံး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တို့တွင် ဖော်ပြပါသလား။ မဖော်ပြပါ။
၁. အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၁.၅
၁.က ပြည်တွင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အနုညာတစီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းအပေါ် အနှစ်သာရအားဖြင့် အားလုံးကို ခြုံငုံမိသည့် ခိုင်မာသောဥပဒေ သို့မဟုတ် ခိုင်မာသော တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ အခန်း သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ရှိပါသလား။ ရှိပါသည်။
၁.ခ. အများပြည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒမှအပ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ် ခြင်းမပြုနိုင်သည့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ ရှိပါသလား။ မရှိပါ။
၁.ဂ. တရားဝင်အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ စာပိုဒ် သို့မဟုတ် သဘောတူညီမှုများကို တရားရုံးများတွင် အတည်ပြုနိုင် ပါသလား။ အတည်ပြုနိုင်ပါ သည်။
၂. စေ့စပ်ဖြေရှင်းခြင်း/ပြေငြိမ်းခြင်း ၀.၀
၂.က. ဆန္ဒအလျောက် စေ့စပ်ဖြေရှင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြေငြိမ်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ မလုပ်နိုင်ပါ။
၂.ခ. စေ့စပ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ ပြေငြိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးစလုံး အပေါ် အနှစ်သာရအားဖြင့် အားလုံးကို ခြုံငုံမိသည့် ခိုင်မာသော ဥပဒေ သို့မဟုတ် ခိုင်မာသော တရား မကျင့်ထုံးဥပဒေ အခန်း သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ရှိပါသလား။ မရှိပါ။
၂.ဂ.အမှုသည်များအား စေ့စပ်ဖြေရှင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြေငြိမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်စေရန် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု ရှိပါသလား။ (ဥပမာ- စေ့စပ်ဖြေရှင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြေငြိမ်းခြင်း အောင်မြင်လျှင် ရုံးခွန်ပြန်ပေးခြင်း၊ ဝင်ငွေခွန်ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အလားတူ အခွင့်အရေးများ) မရှိပါ။
မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို ရှေ့ပြေးတရားရုံးများအစီအစဉ်ဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ပထမအဆင့်အဖြစ် ခရိုင်တရားရုံး တစ်ရုံးနှင့် မြို့နယ်တရားရုံး နှစ်ရုံး တို့တွင်လည်းကောင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ခရိုင်တရားရုံး (၁၄) ရုံး နှင့် မြို့နယ်တရားရုံး (၁၂) ရုံးတို့တွင်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့နယ်တရားရုံးအားလုံး၏ တရားမမှုများတွင် အမှုပြီးပြတ်မှုနှုန်း၊ ပြီးပြတ်သည့်တရားမမှုများ၏ ပျမ်းမျှကြာချိန်ကာလ စစ်ဆေးဆဲအမှုများ၏ သက်တမ်းအစီရင်ခံစာ နှင့် အမှုတစ်မှုချင်းစီ၏တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ အသေးစိတ်အမှု စာရင်းများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်-
ရန်ကုန်မြို့ရှိတရားရုံးများ၏ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်နှင့် နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကို အများပြည်သူသိရှိရန်အတွက် အွန်လိုင်းတွင်ဖော်ပြရန် ကာလတို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးများ၏ (၁) ပြီးပြတ် ခဲ့သောတရားမမှုများ၏ ကြန့်ကြာရက်များ အစီရင်ခံစာ၊ (၂) တရားမ မှုများပြီးပြတ်နှုန်း အစီရင်ခံစာ (၃) စစ်ဆေးဆဲအမှုများ၏သက်တမ်း အစီရင်ခံစာ နှင့် (၄) အမှုတစ်မှုချင်းစီ၏တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ တို့ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်-
www.unionsuprecourt. gov.mm /sites /default/files/supreme/yangon clearance rate myanmar.pdf
နည်းပညာသုံးတရားရုံး တည်ထောင်ရေး အလယ်အလတ် ကာလ မဆောင်ရွက်နိုင်သေးပါ။
အမှုရွှေ့ဆိုင်းခြင်းအရည်အတွက်ကို ကန့်သတ်သည့် မူဝါဒပေါ်ထွန်းရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အလယ်အလတ် ကာလ စံသတ်မှတ်ကာလနှင့် အမှုရွှေ့ဆိုင်းသည့်မူဝါဒများ ပါဝင်သည့် မှုခင်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ တွင် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-
အကြိုညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး အလယ်အလတ် ကာလ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တရားရုံး (၂၆) ရုံး အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် နှင့် အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ် တရားရုံးအားလုံးတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ် ထားပါသည်။
တရားသူကြီးများနှင့် ရှေ့နေများအတွက် လက်ရှိ အမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၊ အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် အမှုစီမံခန့်ခွဲမှု စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကာလရှည် မဆောင်ရွက်နိုင်သေးပါ။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအမှု စီရင်ချက်များကို အများပြည်သူ သိရှိနိုင် ရန်အတွက် ထုတ်ပြန်ရေး ကာလရှည် နှစ်အလိုက် မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးများကို ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအမှုများ၏ မူလတရားရုံး၊ အယူခံတရားရုံး နှင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော် ချုပ်၏ စီရင်ချက်များကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် လွှင့်တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အောင်တွင် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
အငြင်းပွားမှုကို အခြားနည်း ဖြေရှင်းသည့် စနစ် နောက်တစ်မျိုး ပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များ စေ့စပ်ဖြေရှင်းသည့် ဥပဒေစနစ် ပေါ်ပေါက်လာရေး ကာလရှည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များ စေ့စပ်ဖြေရှင်းသည့် ဥပဒေစနစ် ပေါ်ပေါက်လာရေးကို ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍက ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
အငြင်းပွားမှုများကို အခြားနည်း ဖြေရှင်းသည့်စင်တာ တည်ထောင်ရေး (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနုညာတ ဖြေရှင်းခြင်းစင်တာ) ကာလရှည် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍက ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာတရားရုံး တည်ထောင်ရေး နှင့် တရားသူကြီးများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေး ကာလရှည် တရားသူကြီးများအတွက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်း များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေရှုထောင့်မှလေ့လာ ခြင်း” စာအုပ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာတရားရုံး/ဌာန တည်ထောင် ရန်အတွက် လက်တွေ့ကျသည့်နည်းလမ်းများ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ပါမည်။
တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး ကာလရှည် တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် စဉ်းစားဆဲ
စမော်ကော်တရားရုံး (တန်ဖိုးနည်း တောင်းဆိုမှုများစစ်ဆေးသည့် တရားရုံး) တည်ထောင်ရေး ကာလရှည် စမော်ကော်တရားရုံး (တန်ဖိုးနည်း တောင်းဆိုမှုများစစ်ဆေးသည့် တရားရုံး) တည်ထောင်ရန် စဉ်းစားဆဲ
ပဋိညာဉ်များအတည်ပြုဆောင်ရွက်ခြင်း အညွှန်ကိန်း အထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်တင်နွယ်စိုးဖြစ်ပါသည်။